1Russian XBIT, ndezvekambani N. V. Company1X Corp. uye vane rezinesi muCuraçao. Zvinoita yako here? Kukunda nyika yemitambo online. Sei? Nemusika mukuru wekutengesa zvinyorwa uye zvingangodaro zvakanyanya mabhonasi emipimo kupfuura isu (uye ivo) hazvina kumboonekwa. Uye isu tiri kutaura pamusoro pekugamuchirwa bhonasi iyo […]
iyo yakakura network ye paris Unibet Casino Unibet yakakamurwa nzanga. Uye Malta-based rezinesi (SMG), iyo kambani yeArmah ine mimwe yakanakisa online casino mitambo, sezvo inoshandisa matatu yeakanakisa software seNet Entertainment, Microgaming o Yggdrasil. Asi yeNetEnt mutoro unodarika matatu-makota […]
Kana Bwin, kunyangwe pasi pezita rekare Betandwin, akaberekerwa muVienna mu 1998, zvakaoma chero munhu anogona kufanotaura nzira yekubudirira. Kupfuura 22 mamirioni evatengi vakaisa mari yavo mumitambo, uyo ave mumwe wevanotungamira vatambi vepasi rose mumutambo wepasi rose. Kunyangwe rukudzo rwuri chaizvo […]
Behind 888sport uye mucherechedzo, nyika inozivikanwa re 888 Holdings PLC. Kubva 2008, kambani inopa poker uye kasino uye kubheja kwemitambo. brand yakakurumidza kuwana mukurumbira seinoremekedzeka uye inokwezva imba paris. Mukuongorora kwedu, isu ticha nyatsotevera opareta kune kiyi maneja manejiti […]
Kana iwo makuru mazita mune yepasirese indasitiri yemitambo muParis, haigoni kubvisa uye online chat vachipa Betfair.Iyi England, Paris Stock Exchange inozivikanwa nehurongwa. Pazasi, ngatitarisei zvakanyanya mumitambo mumhando dzose dzakakodzera. Ndokutanga kwedu? Kuvimbika kwakadii Paris kunopa? Kune bhonasi here? […]
Kunyangwe hupfumi ruzivo, chiratidzo chinowanikwa muSpain mumwedzi yekupedzisira. Munyika yedu, yakabvumidzwa neDirector Directorate Yekubheja (Vamwari) ndiko kuguma kwe data, saka tinogona kuvimba nekuchengetedza kwepuratifomu. Iyo Sport mode inofarirwa neSpanish uye kunyange yakanyanya kunakidza muParis inogona kugadzirisa iyo […]
Kutamba yakanyatsogadziriswa chikamu pamba chinhu chinozivikanwa nemunhu wese, asi zvakare ichokwadi kuti mamiriro ekunze emukasino anopera. Asi nei tichifanira kumirira vhiki kuti tiende kuino kasino kunakidzwa nemutambo? Izvi ndizvo zvinoshandiswa nekambani yedhisiti, ndiani […]
Interwetten ndeimwe yevanotungamira mitambo yekubheja vatambi muEurope. Iyo kambani yeAustria yakavambwa mukati 1990 por Wolfgang Fabian; panguva iyoyo semudzidzi wezvehupfumi, mabhizinesi madiki ayo akatsunga kupinda mune indasitiri yemitambo. In 1996, Ndakaenda online ndikatanga yekutanga muParis. […]
Sezvo isu tinokudziridza matekiniki matsva, adapta Luckia anogona kuenda kune webhusaiti yake kuti awane zvaari nhasi. Izvo zvakakosha kuti makambani azivise vashandisi nemhando dzese shanduko kuti yavo yemitambo iite seyakazara sezvinobvira.. Zvakare, mutambo uri mukamuri remitambo, kamuri […]
Kana iwe ukaenda kune yavo webhusaiti, iwe munguva pfupi iwe uchaona kuti pane yakawanda yemumvuri uye yakawanda yezvinwiwa, zviviri zvinhu zvakakosha pamutambi chero upi zvake anoda kufarira mutambo mutambo. Icho chinangwa chesaiti ino ndechekupa yakanakisa sevhisi kune vatambi uye yakasununguka ye 5 makore ehunyanzvi mune ino indasitiri […]